Jaaliyada DDSI: Madaxwayne Cabdi Maxamud Cumar Waa in uu Sii Daayaa Uagaas Maxamud Duulane Ugaas Xaashi – Rasaasa News
Jaaliyada DDSI: Madaxwayne Cabdi Maxamud Cumar Waa in uu Sii Daayaa Uagaas Maxamud Duulane Ugaas Xaashi
Mar 1, 2012 Jaaliyada DDS: Madaxwayne Cabdi Maxamud Cumar Waa in uu Sii Daayaa Ugaaskiisa Uagaas Maxamud Duulane Ugaas Xaashi
Dhamaan Jaaliyada Somalida Ethiopia meel kasta oo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadaba, waxay kaa codsanayaan Madaxaywayne Cabdi Maxamud Cumar in aad sii daayso Ugaas Maxamud Duulane Ugaas Xaashi oo mudo sabab la,aan u xidhan.
Xadhiga ugaas Maxamuud Duulane ma aha mid ay ilowsan yihiin Jaaliyadaha degaanka Somalida Ethiopia, laakiin waxay diidan yihiin in arinka madaxweynaha ka yimid ee odayaal ka hadleen kor loo qaado “gacmo geel jire kor looma maydho”.
Ugaasku tariikh dheer oo soo jireen ah ayuu ku leeyahay degaanka Somalida Ethiopia, waxaana uu ka mid yahay dadka lama taabtaanka ah ee gaal iyo islaam wad ciseeyaan.
Jaaliyadaha DDSI aad iyo aad ayay uga xuntahay xadhiga dheer ee uu ku jiro Ugaas Maxamud Duulane oo runtii ayna qabaninin arintaasi isaga iyo dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia midna.
Xili waxaa la marayaa uu deegaanka Somalida Ethiopia ku talaabsaday horumar iyo nabadgaliyo dhab ah. Ugaaskuna waxaa uu ka mid ahaa dadkii ka shaqeeyey arinta amaanka, marka xiligan looma baahna in dib loo soo celiyo horumarkii iyo nabadgaliyadii ay dawlada iyo dadweynaha degaanka gude iyo dibadba wadeen.
Mar labaad hadaanu nahay Jaaliyada DDSI madaxwayne Abdi Maxamud waxaanu kaa codsanaynaa inaad sii dayso Ugaaska. Wakhtigan oo aad u iminayso Jaaliyada dibada ee DDSI ee dalka Ingriiska, runtii waa arin muhiim u ah Jaaliyaadka.
Maanta oo aad joogto Ingriiska, London lana kulmayso Jaaliyadaha DDSI ee dalka Ingriiska, Madaxwayne waxay kugu tahay dhabar-jab in uu sii xirnaado Ugaaska guud ee Ogaden.
Ugu dambayntii Jaaliyada DDSI dal iyo dibadba waxay ku dadaalaysaa wixii wanaagsan ee uu deegaanku u baahan yahay dinaca horumarka iyo nabadgaliyadaba.
Jaaliyadaha DDSI – dalalka reer galbeedka
Madaxweynaha Deegaanka Somalida Ethiopia oo ka Degay London